ရတောင့်ရခဲ အခွင့်အရေးဖြစ်သော ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီး၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်ကျင်းပမည့် (၈)ရက်ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲသို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဤတရားစခမ်းတွင် မေတ္တာဘာဝနာ နှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာကို နည်းစနစ်တကျ လက်တွေ့သင်ပြကာ ပွားများကျင့်ကြံအားထုတ် နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်၍တရားရှုမှတ်ခြင်း၊ စင်္ကြလျှောက်၍ တရားရှုမှတ်ခြင်း၊ တရားရှုမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ တရားတော်နာယူခြင်းစသည့် အခန်းကဏ္ဍများပါဝင်ပါသည်။
Join Venerable Chanmyay Sayadawgyi who is asaMaster Teacher of Vipassana Meditation, along with his disciples, will impart the knowledge of Vipassana Meditation techniques from the Mahasi tradition during this retreat. Immerse yourself in meditation sessions and interactive interviews with the Master Teacher himself, and stand to benefit from the intensive meditation to achieveacalmer state of mind.
Date : 18 - 25 July 2018 (8-day) | Wed - Wed
Venue : Venerable Hong Choon Memorial Hall,
Level 4, Hall of No Form
88 Bright Hill Road, Singapore 574117.